महिलाको कोठामा प्रहरीका सई पस्दा भयो यस्तो झ’डप – PathivaraOnline
Home > समाचार > महिलाको कोठामा प्रहरीका सई पस्दा भयो यस्तो झ’डप
ललितपुर। नेपाल प्रहरीका एकजना सई महिलाको कोठामा मध्यराति पस्दा झ’डपका क्रममा झ्यालबाट फरालेर भागेको रहस्य खुलेको छ । २४ कार्तिकमा हात्तिवनस्थित एकजना महिलाको कोठामा महानगरीय प्रहरी प्रभाग लगनखेलका इञ्चार्ज दीपेन्द्रराज गिरी पसेका थिए । उनी ड्युटी र मातहतको क्षेत्रभन्दा बाहिर थिए । गिरी ज’र्बजस्ती पस्दा महिलाका आफन्त भनिएका पुरुष पनि थिए ।
मध्यराति अर्का पुरुषसँग गिरीको विवाद हुँदा झ’डप भएको थियो । दुई पुरुषबीचको विवादका क्रममा अर्का पुरुषले सई गिरीलाई कोठामा थुनिदिएका थिए । आफू थुनिएपछि सई गिरी झ्यालबाट हाम फालेर भागेका थिए । भाग्ने क्रममा सई गिरीको सञ्चार सेट नै कोठामा छुटेपछि महिलाले प्रहरीलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।
घ’टनाबारे महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका उच्च अधिकारीहरुलाई जानकारी भएपनि संगठनको बदनामी हुने ठानेर लुकाउन खोजियो । तर, घ’टनाको सूचना प्रहरीको माथिल्लो तहसम्म पुगेको छ । आफूलाई कसैले चलाउन नसक्ने भन्दै ललितपुर प्रहरी प्रमुखहरुलाई समेत नटेर्ने गिरीको यस घ’टना भने लुक्न सकेन । सई गिरी संलग्न यस घ’टनाबारे महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख टेकप्रसाद राईसँग जानकारी लिन खोज्दा यसबारे आफूले बुझेर बताउने बताए ।
उनले घटना नघटेको भन्न सकेनन् । ललितपुरका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरुसँग सोध्दा यसबारे एसएसपी राईसँग सोध्न भने । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि गिरीको पुरुषसँग झ’डप भएको थियो । प्रहरी स्रोतले गिरीले कोठामा सञ्चार सेट छाडेको र झ्यालबाट फरालेको जानकारी दियो । त्यसबारे गो’प्य तरिकाले अ’नुसन्धान भइरहेको बुझिएको छ ।
सामान्य विवाद हो, झगडा होइन
यसबारे महानगरीय प्रहरी प्रभाग लगनखेलका इञ्चार्ज दिपेन्द्रराज गिरीसँग बुझ्दा उनले सोही राति खानाका लागि बोलाइएकोले आफू गएको बताए । उनले भने, ‘म खाना खान गएको हुँ र वि’वाद मात्र भाको हो झगडा भएको होइन ।’
आफू ड्युटीपछि खाना खान जाँदा सामान्य वि’वाद भएको भन्दै यसबारे एकजना व्यक्तिले राति नै उजूरी गरेको स्वीकार गरे । घटनाबारे सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि बुझ्न सकिने उनको भनाई थियो । उनले आफूमाथि अ’न्याय भएको भन्दै घ’टनामा उल्लेख भएको जस्तो ठूलो हं’गामा नभएको बताए।
फेरि एक साता निषेधाज्ञा थपिएकाे राजधानीमा यी क्षेत्र खुल्ने पाउने!
प्रेमीले अर्कैसँग विवाह गरेपछि १५ वर्षिय मन्जुले यस्ताे लेखेर गरिन देहत्याग (भिडियो सहित)
भर्खरै कुवेत बाट आयो सबै नेपालीलाई रुवाउने खबर – तस्विर सहित हेर्नुहोस
श्रीमानले विदेशमा कमाएकाे सम्पत्ति लिएर हिडेकि अर्कि पात्र अनुपाकाे वास्तविकता खुल्दै भिनाजु (भिडियो हेर्नुस्)
pathivaraonline.com is an online Blog which index online videos to watch online in an easier accessible manner. This site doesn’t host any content on it own server and just linking to content that was uploaded to popular Online Video hosting sites like dailymmotion.com, Youtube.com, video.google.com, ZShare.net, megavideo.com and such sites. any Violation please inform us at info[email protected]